देशभित्र रोजगारी नपाउँदा जोखिमकै बीचमा युवा विदेश जान तयार - NA MediaNA Mediaदेशभित्र रोजगारी नपाउँदा जोखिमकै बीचमा युवा विदेश जान तयार - NA Media
लकडाउन हुनुभन्दा अघि नै मलेसियाबाट बिदामा घर आएका धादिङका रमेश कार्कीले चार महिनासम्म स्वदेशमै काम खोजे तर लकडाउनले धेरैको रोजगारी गुमेको बेला उनले खोजेजस्तो काम पाएनन । त्यसपछि सरकारले खोल्नासाथ उहाँले मलेसिया जान पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन ।
मलेसियाको रोजगारी गुम्छ कि भन्ने चिन्तामा परेका रमेशलाई पुनः श्रम स्वीकृतिको स्टिकर पाएसँगै यो डर सकिएको छ । यो महामारीका बेलामा कोरोनाको डर र जोखिम त संसारभरी नै छ । तर उहाँलाई त्यसको वास्तै छैन । कम्पनीले बोलाइरहेको छ । मलेसिया पुगेपछि काम निश्चित छ । मासिक आम्दानी पनि हुन्छ । रमेश प्रश्न गर्दै भन्छन , ‘यहाँ न काम छ न कमाई किन बस्नु ?’
मलेसियाबाट बिदामा घर फर्केका थिए रमेश । कम्पनीले दिएको बिदा सकिनै लाग्दा कोरोनाको जोखिम बढ्यो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्‍यो । देशमा लकडाउन भयो ।उनि मलेसिया फर्कन पाउनुभएन ।बिदामा आएका रमेश लकडाउनमा घरभित्रै बन्द हुँदा उता मलेसियामा काम चलि नै रहयो ।मलेसियाका पाहाङ राज्यमा सुपरमार्केमा काम गर्छन रमेश । कमाइ महिनाको ६० हजार रुपैयाँ छ । बिदामा फर्किएकाले दुई महिनाको तलब त कम्पनीबाट लिनै बाँकी छ ।
‘यहाँ अहिले काम पाइँदैन, उता त गएपछि काम र कमाइ पक्का छ, किन बस्नु त यहाँ ?’ रमेश कोरोना महामारीकै बीचमा परदेश जान खोज्नुको कारण बताउछन् ।
रमेशले जस्तै गुल्मीका मणी ज्ञवालीले पनि पुनः श्रम स्वीकृति खुलेपछि यूएई जाने प्रक्रिया थालेका छन् । मार्च २ तारिखमा बिदामा घर आएका मणी कोरोना महामारीका कारण बिदा सकिएपछि फर्कन पाएनन ।मणि घरमै रोकिंदा पनि उता यूएईमा भने उहाँको काम रोकिएन । सुपरमार्केटमा काम गर्ने मणीको कम्पनी चलिरहेकै छ । झण्डै चार वर्षदेखि त्यही कम्पनीमा कार्यरत उहाँलाई सेवासुविधा र तलब पनि राम्रो दिएको छ । यहाँ यतिका महिना बस्दा पनि स्वदेशमै के काम गर्ने भनेर उहाँले मेसो पाएनन् । उडान बन्दा हुँदा परदेशबाट कम्पनीले बोलाउँदा पनि जान पाइएन भन्छन मणी ।‘सबै साथीहरुले काम गरिरहेका छन्, कसैलाई पनि केही भएको छैन, मैले पनि गएपछि सुरक्षा सतर्कता अपनाएरै काम गर्ने हो’ मणी भन्नुहुन्छ, ‘हुँदाखाँदाको जागिर छाडेर यहाँ के गर्नु ? न काम पाइन्छ, न अन्य केही कमाइको बाटो नै छ ।’
मणीले यूएई जानको लागि प्रक्रिया थालेका छन् । त्यसका लागि कम्पनीसँग समन्वय पनि भइरहेको छ । उताको प्रक्रिया मिल्नासाथ मणी यूएई उड्ने योजनामा छन् ।
यहाँ बेरोजगार बस्नुभन्दा सुरक्षा सतर्कता अपनाएर परदेश जान परिवारले पनि अनुमति दिएका छन् । ‘परीक्षण गरेरै जाने हो, उता पनि सुरक्षाका उपायहरु अपनाइन्छ, डर छैन’ मणी भन्छन ।सरकारले पुनः श्रम स्वीकृति खोलेको चार दिनको अवधिमा मणी र रमेशजस्तै एक हजार ७९ जनाले विदेश जानका लागि पुन : श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
गन्तब्य मुलुक मा अहिले जोखिम बढीरहेको र यही अवस्थामा सरकारले पुनः श्रम स्वीकृति खोल्नु र युवाहरुले जानका लागि खुट्टा उचाल्नु जोखिमयुक्त रहेको डा. गणेश गुरुङको भनाइ छ । अहिले पुनः श्रम स्वीकृति खोल्दा र भोलिका दिनमा यी विभिन्न कारणले जाने वातावरण नबन्दा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका युवाले नै जुलुस निकाल्ने र जोखिमकै बीचमा व्यवसायिक उडान खोल्नुपर्ने दबाब सृजना हुनसक्ने विज्ञ डा. गुरुङ बताउछन् ।
‘कोरोनाको कारण अवस्था देशमा मात्र होइन, विदेशमासमेत समान्य भएको छैन, यस्तो बेलामा भिडभाड गरेर कार्यालय खोलेर पुनः श्रम स्वीकृति किन दिएको हो भनेर मैले बुझेको छैन’ डा. गुरुङ भन्छन । यो बेलामा पुनः श्रम स्वीकृति खोल्दा पनि डिजिटल माध्यमबाट कार्यालयमा उपस्थित नभइ लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
Gallery image with caption: बिदामा नेपाल आएका श्रमिकहरु विदेश फर्कदा के के कुरा मा ध्यान पुर्याउने ??
Gallery image with caption: कोरोनाको महामारी साम्य हुँदै गर्दा साउदीमा पुनर्विचार गर्ने श्रमिक बढ्दै
Gallery image with caption: तलब र टिकट खर्च नदिने वैदेशिक रोजगारदाताको मागपत्र ५ वर्ष रोक्का गरिने
Gallery image with caption: विदेशबाट सरकारी खर्चमा उद्धारका लागि सूचि बनाउने जिम्मा दूतावासको